Thwebula Psiphon 3 – Windows – Vessoft
Psiphon – a isofthiwe yakhelwe ukuvimbela ukucwaninga internet. Isofthiwe isebenzisa ubuchwepheshe obehlukene proxy ukunikeza ukufinyelela namawebhusayithi ivinjiwe. Psiphon ukufakwa ngokuzenzakalelayo izilungiselelo proxy uhlelo ezisetshenziswa ngokuzenzakalela by the iziphequluli zanamuhla. Isofthiwe futhi linikeza isivikelo ukweba amaphasiwedi noma Nokugenca akhawunti ngesikhathi ukuhlala internet. Psiphon ine interface lula futhi enembile.
Ikhubaza internet ukucwaninga
Ukusekela for ubuchwepheshe ezahlukene proxy
Ukuvikelwa ngokumelene ukweba amaphasiwedi noma hacking akhawunti
Amazwana on Psiphon:
Psiphon Ahlobene software:
Ukubethelwa Imenenja mahhala iphasiwedi kanye nedatha secret. Isofthiwe isebenzisa ukubethela algorithm ekhethekile ubumfihlo ulwazi olulondolozwe.
English, Українська, Français, Español... Proxifier 3.28 Standard futhi Portable
Internet Ukubethelwa Ithuluzi unika isofthiwe inethiwekhi ikhono ukusebenza ngokusebenzisa seseva uma engekho yayo. Futhi isofthiwe Bypasses nemikhawulo firewall kanye kwenza ukufihla-ikheli le-IP.
Ares 3.1.9.4045 futhi 2.4.4